I-China Dongshen Classic Design Black Men's Shaving Brush Setha Silvertip Shaving Brush Safety Razor Manufacturer kanye nomhlinzeki | UDongmei
Ukwenza okuhle kobuchwepheshe ...
Igama lomkhiqizo Ibhulashi elicokeme lobungcweti le-13pcs elas lesikhumba ...
Ikhwalithi ephezulu m professional ...
I-Dongshen Makeup Brushes Inikezela Ngezinhlobonhlobo Zamabhulashi Wokwenza - iKabuki ...
Yokusungula okusheshayo lokuthumela bla ...
I-Dongshen iyisitayela esihle kodwa sobusha futhi esithandekayo sesitayela sobuhle ...
I-Dongshen Classic Design Black Men's Shaving Brush Setha i-Silvertip Shaving Brush Ukuphepha Kwensimbi
Kwabesilisa abaningi, ukushefa yingxenye ebalulekile yesiko lokuzilungisa nsuku zonke. Uma ungomunye wabo, sidale okokugcina insingo ibhulashi kit yendoda yanamuhla ukukusiza ukhahlele usuku lwakho ngendlela efanele. Isethi yebhulashi lokushefa lamadoda e-Dongshen liqukethe konke okudingayo ukushefa kwekhwalithi - insingo yekhwalithi ephezulu yokuphepha, isitendi sokushefa sekhwalithi ye-premium, nebhulashi lokushefa elihle.
Igama lomkhiqizo I-Dongshen Classic Design Black Men's Shaving Brush Setha i-Silvertip Shaving Brush Ukuphepha Kwensimbi
Izinto ze-Knot Izinwele zebheji (i-silvertip badger, amabhendi amabili ebhendi, i-super badger, i-badger ehamba phambili, i-badger emsulwa, ibheji emnyama).
Izinto zokubamba Isibambo sensimbi nokhuni
Usayizi we-knot singakwazi akhiqize ngokusho isicelo sakho
Ilogo Dongshen shayela, noma camanga design logo izotholakala
1. Thuthukisa ukushefa Stand: Imfashini ebucayi, emihle epholile bushelelezi, umuzwa oqinile wekhwalithi, ukunethezeka okuhle. Kuyisipho esihle kakhulu kunoma imaphi amadoda abonga indlela endala yokugunda okushefa. Lesi yisinqumo esihle kakhulu sezipho zikababa!
2. Yakhelwe Ukushefa Kwakho Okumanzi: Impilo Nokuphepha Kugcina insingo ibhulashi elomile ukunciphisa izinkinga zesikhumba. Kusiza ukomiswa komoya: Kuzolula insingo yakho kanye nempilo yakho uma usoma kahle.
3. I-Ergonomic Double Edge Manual Razor: Idizayini ye-ergonomic ilungele isikhumba futhi yehlisa umthwalo esihlakaleni seziguli ezine-arthritis. Vumela ukushefa kungabe kusaba yisicefe futhi kukhathele!
4. Umklamo Oqinile: Wenziwe ngensimbi engagqwali yebanga le-premium, impilo nokuphepha, kukhanya bushelelezi futhi kulula ukuwuhlanza. Ukumelana nokugqwala kwe-zinc alloy stand nensimbi engagqwali yakhelwe ukuhlala isikhathi eside. isisekelo esinesisindo esinamanzi amelana namanzi non-skid Ngokuqina.
5. Ibhulashi elibizayo le-Silvertip Badger: Izinwele zezinwele zebheji ezenziwe ngezandla eziyi-100%. ibhulashi lokuShefa elisezingeni eliphezulu njengoba linikeza kokubili ukugcinwa kwamanzi okuhle kakhulu nokuthamba okungenakuqhathaniswa, Kulula ukwenza ukugoqa okunamandla, okucwebezelayo. Khipha ngobumnene isikhumba futhi usithobe isikhumba.
Samukela i-OEM ne-ODM oda. Ilogo yamakhasimende yamukelekile.
Umbala.size.material nokupakisha kwenziwa ngezifiso.
Izinwele zebhulashi zizokanywa futhi zigundiwe ngokucophelela.
Isibambo sebhulashi sizopendwa ngomdwebo olungele i-Eco.
I-ferrule yebhulashi izokwenziwa ngokunembile ngokwesidingo seKhasimende
Langaphambilini I-Dongshen ukunethezeka kwezinkuni zemvelo umbala wokuphepha i-razor super badger hair shaving brush isethi
Olandelayo: Ibhulashi lokwenziwa Izinwele Knot Pure Black Plastic Handle Shaving Brush
Black Mini Enkulu 10pcs Vegan Izinwele Zokwenziwa ...
Eco-friendly izinga okusezingeni isibambo sokhuni fibre s ...
I-Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. yasungulwa ngo-1986. Iyinkampani yokukhiqiza ibhulashi ne-shaving shaving kanye nokuhlanganisa ukuthengisa / ukukhiqiza nokukhiqiza.